Nanana xnumx'üncü ny Erzurum ao Torkia, Transportation | RayHaber
[08 / 12 / 2019] Bandırma Demiryolu Hattı Yeniden Yatırım Gündeminde	16 Bursa
HomeTORKIAFaritra atsinanan'i Anatolia25 ErzurumNanana xnumx'üncü ny Erzurum ao Torkia, Transportation
14 / 11 / 2019 25 Erzurum, Faritra atsinanan'i Anatolia, ANKAPOBENY, Highway, Tire Wheel Systems, TORKIA
Erzurum dia ny vorontsiloza fahatelo dia fitateram-bahoaka
Nanana xnumx'üncü ny Erzurum any Torkia Fitaterana; Ny kaominin'i Erzurum Metropolitan dia milalao toerana ambony amin'ny serivisy fitaterana ihany koa. Torkia Nitarika manerana "izy ireo Metropolitan Fitaterana Performance" naka toerana fahatelo ao amin'ny Kaominina fikarohana. Avy amin'ny fampiononana ny fidirana sy ny fotoana mankany amin'ny tambin-karama, fepetra maro no nangatahana amin'ny mpandray anjara; Erzurum, 3 nihaona tamin'ny 30 avy amin'ny metropolitan. Ny fanadihadiana amin'ny orinasa Areda Survey dia niresaka momba ny fanatanterahana ny fitateram-bahoaka any amin'ireo tanàna metropolitan. Nifantoka tamin'ny serivisy fitateram-bahoaka any amin'ny tanàna metropolitan toa ny Istanbul, Ankara ary Izmir ny orinasa.
Erzurum TORKIA LASA fitateram-bahoaka 3'ÜNCÜ
Nametraka fanontaniana ireo mpandray anjara toy ny fampiononana, ny fampahalalana, ny fidirana, ny fotoana, ny karama, ny fiarovana, ny mpiasa, ny zava-misy eo amin'ny tontolo iainana, ny famoahana sy ny fanarahana. Vokatry ny fanadihadiana, izay natao tamin'ny 100, nipetraka teo an-tampon'ny lisitra i Eskişehir miaraka amin'ny teboka 64,1, ary i Konya miaraka amin'ny isa 60,6. Tao amin'ny fanadihadiana nataon'ny besinimaro dia fahatelo i Erzurum tamin'ny isa 60,5, fahefatra i Kahramanmaraş ary misy isa 59,0 ary fahadimy i Ankara ary misy isa 57,4. Denizli, Istanbul sy Bursa dia nanaraka ireo faritany ireo.
REHEFA AZONY VAO AZONAO VONINA
Nandritra ny fanadihadiana Toplu Metropolitan Performance Performance ”dia nanontaniana ihany koa ireo mpandray anjara hoe maninona izy ireo no maniry ny fitateram-bahoaka na tsia. Raha ny 80,5 isan-jaton'ny mpandray anjara dia nilaza fa aleony ny fitateram-bahoaka ho an'ny fitaterana, ireo izay tsy tia azy io dia "manome fiara fitateram-bahoaka tsara kokoa", sağlan hanome fitateram-bahoaka azo antoka kokoa "," mba hahazoana antoka fa ny mpamily no nahita fianarana "ary ny birao fitaterana haingana kokoa. manome fitaterana .. Araka ny valin'ny fikarohana, ny fiara fitateram-bahoaka no tiana indrindra dia ny fiara fitateram-bahoaka, fa ny telo amin'ireo antony lehibe indrindra amin'ny serivisy fitaterana dia voatanisa ho fampiononana, fampahalalana ary fidirana.
Ny antony nahatonga an'i IETT ho Manampahefana Mpanatanteraka amin'ny Fifamoivoizana
"Torkia Card amin'ny" Very Hanao dingana lehibe
Torkia Ages nitsambikina in Fitaterana
Fivoaran-draharaha any Torkia Revolisiona Atao in Fepetra takina Fitaterana
Ny mponina ao Konya dia nilaza fa nitondra fitateram-bahoaka ny fitaterana
Nanomboka vanim-potoana vaovao i Antalya amin'ny fitateram-bahoaka
Gaziantep no fitaterana an'olo-tsotra
Motaş manomboka fampihatra amin'ny fampitaovana mandritra ny fitateram-bahoaka
Nahazo fahafaham-po ny fitateram-bahoaka tao Kayseri
Tarifa vaovao amin'ny fitateram-bahoaka ao Konya!
Ny fampiharana ny mpandefitra amin'ny fitateram-bahoaka ao Antalya dia manomboka
Ao Kocaeli, manomboka ny rafitra fitateram-bahoaka!
Bilaogin'ny Fitateram-Bahoaka An-tariby!
Hygiene amin'ny fitateram-bahoaka ao Mugla